Muuri News Network » Daawo Video+Sawiro: Beesha Daadoow oo Musharax Pr. Cali M.Gacal u Muujisay taageero weyn iyo M.Barre oo ka hadlay..
Daawo Video+Sawiro: Beesha Daadoow oo Musharax Pr. Cali M.Gacal u Muujisay taageero weyn iyo M.Barre oo ka hadlay..
Sep 19, 2016 - Comments off
Kullan ballaaran oo lagu taageerayay Musharaxnimada professor Cali Maxamuud Gacal ayaa waxa ay maalinimadii shalay ka dhacday hudheel ka mid ah hodheelada ku yaala magaalada Muqdisho.
Kullanka ayaa waaxaa ka soo qeybgalay dhamaan waxgaradka, dhalinyarada, iyo haweenka Beesha Daadoow oo dhamaantooda aad ugu riyaaqsanaa musharaxnimada professor Cali Maxamud Gacal.
Odayaashii iyo madaxdii kulanka ka soo qeybgalay waxaa ka mid ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane Macalim Barre horayna u ahaa nabadoonka Beesha Biimaal.
Macalin Barre ayaa carabka ku nuftay muhiimadda ay guud ahaan soomaaliya u leedahay musharaxnimada Professor Cali Maxamuud Gacal iyo gaar ahaan Beesha Biimaal, waxa uu sidoo kale xusay waxyaabihii uu professorka usoo qabtay deegaanada iyo shacabka Beesha Biimaal.
nabadoonada iyo wasiirka ayaa ballan qaaday in ay garab istaagi doonaan musharaxnimada Professor cali Gacal.
Nabadoonada kale ee ka hadlay kulanka ayaa iyana dhankooda sheegay in ay nasiib u tahay Beesha Biimaal in ay helaan aqoonyahan iyo khabiir ku matalikara baarlamaanka cusub islamarkaana uu ka soo daahay musharaxnimadiisa balse looga baahnaa in uu waqtihore baarlamaanka ka mid noqda. Hadaladaan ayeey ka jeediyeen kulanka iyagoo muujinayay shucuurta iyo dareenka ay u hayaan Musharax professor Cali Maxamud Gacal.
Ugu danbeyntii kulanka ayaa waxaa sacab iyo Mashxarad Makaroofanka loogu soo dhaweeyay musahraxa isagoo uga mahadceliyay soo dhaweynta iyo taageerada ay u muujiyeen, waxa uu sidoo kale ka hadlay waxa uu u qabandoono shacabka hadii ladoorto sida, aasaasidda jaamacado, madaaris, horumarinta hogaanka siyaasadda iyo in uu horumariyo ururada wax u qabta deegaanada Beesha; isagoo xusay in uu 80% waxbadan usoo qabtay Beesha 20% ka dhimana uu dhameystiri doono hadii lagu amino xilka beesha.
Iagoo si xushmadleh uga codsaday in ay kulagarabgalaan raadinta codadka ay dhiibandoonaan ergada ay beesha iska dhex xushay; isagoo sidoo kale ku dhawaaqay in uu la kulmi doono dhawaan dhamaan ergada beeshiisa.
Isha Ku Haay Muurinews.com Xogta wararka iyo warbixinada